बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रद्धिवद्धता, सोधे– ऋण जानै छाडेको हो ? - Arthakoartha.com
काठमाडौं, ७ माघ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक र प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्रीले स्प्रेडदरबाहेक बैंकर्सका अन्य चासोमा छलफल गरे । बैंक कर्जामा सरकारले कसिलो नीति, खासगरी करको अनुपालना बढाउने उपाय कार्यान्वयन गरेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा घटेको छ ।
कसिलो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाभन्दा सहकारीतिर कर्जाको माग सरेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महिना व्यक्तिगत कर्जामा समेत कडाइँ गरेको छ । सवारी कर्जा र घर कर्जा लिदाँ आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढीको किस्ता बनाउन नपाइने तथा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बुझाएको वासलात र कर कार्यालयमा बुझाएको वासलात आपसमा भिडाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले वासलातलाई सुसज्जित गरी बैंकको कर्जा लिन खोज्ने व्यवसायीलाई धक्का पुगेको छ । यथार्थ कारोबार विवरणका आधारमा मात्र ऋण पाउने भएपछि उनीहरुको कर्जा प्रशोधन क्षमता स्वभाविक रुपमा घटेको छ ।
बैंकर्स प्रतिनिधिहरुलाई भेटमा अर्थमन्त्रीले कर्जा जानै छाडेको हो र ? भनेर सोध्न समेत भ्याएका थिए ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूकै कर्जा विस्तार गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिभन्दा अहिले ६० अर्ब रुपैयाँ घटेको हो ।
निषेधाज्ञाको प्रभाव नपरेको आयोजना : नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण नियमित गतिमा
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरि अधिकारी चयन
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन खुला